एकपछि अर्को गर्दै समुदायमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि, १० दिनका लागि भर्खर जारी भयो यस्तो सुचना !! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/एकपछि अर्को गर्दै समुदायमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि, १० दिनका लागि भर्खर जारी भयो यस्तो सुचना !!
एकपछि अर्को गर्दै समुदायमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि, १० दिनका लागि भर्खर जारी भयो यस्तो सुचना !!
समुदाय संक्रमण बढेकाले भानु नगरपालिकामा १० दिन थप निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ । एकपछि अर्को गर्दै समुदायस्तरमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि भानु नगरपालिकाको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको हो ।
गत साउन २७ गते यता भानुमा निषेधाज्ञा जारी छ। २७ गते नगरपालिकाले अत्यावश्यकबाहेकका आवतजावतमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको थियो । अब भाद्र २४ गतेसम्मको निषेधाज्ञाको अवधि पूरा भएमा भानु लगातार एक महिना बन्द हुने तहमा पर्नेछ। दमौली । समुदाय संक्रमण बढेकाले भानु नगरपालिकामा १० दिन थप निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ । एकपछि अर्को गर्दै समुदायस्तरमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि भानु नगरपालिकाको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको हो । गत साउन २७ गते यता भानुमा निषेधाज्ञा जारी छ। ** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अवश्य पढ्नुहोला, को’रोना भा’इरसको जो’खिमका कारण मानिस भेटघाट हुन जिल्लाभर क’डाइ गरिएको छ। सं’क्रमण आफूलाई पनि सर्न सक्ने जो’खिमका कारण स्वयं व्यक्ति नै सतर्क हुनुपर्ने अवस्थामा धादिङका किसानमा भने को’रोना सं’क्रमणभन्दा रासायनिक मलको चिन्ता बढी देखिएको छ। को’रोना भा’इरसको जो’खिम भए पनि सयौं किसान युरिया मल लिन तछाड मछाड गर्दै उर्लिएका छन्। कसैलाई को’रोनाको ड’र छैन, ज्या’न जो’खिममा राखेर भए पनि १५ किलो मल लिने हतारो उनीहरुलाई परेको छ। मल लिने लाइन लाग्दा लाग्दै चर्को घामका कारण बे’होस हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। शुक्रबार नीलकण्ठ ४ को रायटार डिपोमा लाइन बसेकी नीलकण्ठ ४ कै एक महिला बिहान ११ बजेतिर लाइनमा बे’होस भइन्। उनलाई सँगै रहेका साथीले उपचार गराए।
लामो समयपछि गत शुक्रबार र शनिबार मल आउने सुचना पाएका किसान बिहान ५ बजेदेखि मल पाइने आशामा सहकारी र डिपोमा लाइन लागेका थिए। बिहानैदेखि चर्को घाममा भो’क भो’कै लाइन बस्नुपरेको र कमजोरी भएकाले गर्दा लाइनमै बेहोस भएको नीलकण्ठ ४ का सुन्दर गुरुङले बताए गएको जेठ महिनादेखि धादिङवेशीमा युरिया मलको अ’भाव छ। मकैमा मल हाल्ने बेलामा पनि सहज नपाएको किसानले त्यतिबेला पनि ५-१० किलो मल किन्नको लागि धेरै दिन सदरमुकाम धाउनु परेको थियो। अहिले पनि गएको असार साउनमा रोपाइ गरिएको खेतमा मल हाल्ने बेला भएको र सहज रुपमा नपाएकाले मल उपलब्ध भएको दिन एकैपटक सयौं किसान मल लिन थुप्रिएको किसानले बताएका छन्। नीलकण्ठ ८ का रोशनकुमालले भने, ‘खेतमा मल हाल्न पाइएन भने उत्पादन नै हुँदैन, चाहिएको बेलामा कहिल्यै पनि सहज छैन, आएको बेलाला यसरी तछाड मछाड गरिएन भने खानै नपाएर मरिने होला, अहिलेलाई के को को’रोना न सोरोना।’ ** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
शुक्रबार देखिएको भी’ड शनिबार पनि उस्तै थियो। बढ्दो को’रोना सं’क्रमणको ‘ड’रले जिल्लामा निशेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर मल पाउने आशाले शनिबार एकाबिहानै हातमा नाम्लो र बोरा बोकेर सदरमुकामस्थित नीलकण्ठ सहकारी कार्यालय भवन परिसरमा खचाखच भए। शुक्रबार सदरमुकाम बाहिरका केही सहकारीले डिपोमार्फत बजारमै मल वितरण गरे। शनिबार नीलकण्ठ सहकारीको डिपोबाट मल वितरण गरिएको थियो। मल नपाउने चि;न्तामा एकाबिहानै सहकारीमा आइपुगेका किसानलाई सामाजिक दूरी, मास्क लगाउनुभन्दा पनि मलकै चि’न्ताले सताएको थियो। किसानहरुको भी’ड बढ्दै गएपछि उनीहरुले मल सकिन्छ कि भन्ने चि’न्ताले सहकारीको फलामे गेटसमेत फो’डेर भित्रै पसेका थिए। नीलकण्ठ १२ कि सावित्री लंसालले भनिन्, ‘ज्या’न जो’खिमा पर्छ रो’ग लाग्न सक्छ भन्ने त थाहा छ नि तर समस्याले रो’ग र भो’क भन्दो रहेनछ, अहिले मल हाल्न पाइएन उत्पादन कम हुन्छ र हिउँदमा किनेर खानुपर्छ।’ एक बोरा मल ३ जना किसानलाई बाड्दासमेत ४ सय २० बोरा मलले माग नपुगेपछि २ सयभन्दा बढी कृषकहरु रित्तो हात फर्कनुपरेको नीलकण्ठ सहकारीका व्यवस्थापक हरि रिजालले बताए। रासायनिक मल आयो रे भन्ने सुनेका किसानले रो’ग र भो’क नभनी मल पाउनेमा ढुक्क हुँदै सदरमुकाम झरेका केही किसानहरु निराश हुँदै घर फर्किन बा’ध्य भएका थिए। ** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?